SOO BANDHIG DHAMMAAN QUUDAN, 5 RAAXO FURSAN OO KU JIRTA KARIIMKA
Meel hudheel raaxo leh oo lagu nasto oo ku yaal cirifka qarsoodiga ah ee bacaadka ah, halkaas oo urta frangipani ay buuxiso hawada, dhawaqa mowjadaha ku wareegaya xeebta ayaa kugu hareereysan, iyo waayo-aragnimo loogu talagalay in lagu soo nooleeyo, dib loogu soo celiyo oo loo dejiyo nafta sugeysa. Kusoo dhawow Hermitage Bay.
Waxay ku yaalliin geeska xasilloon ee Antigua oo waxay siisaa hoy raaxo leh, fayoqab iyo cunno, Dalxiiskeenna taxaddar leh ayaa loogu dabaaldegaa nabadda, diirimaadka iyo quruxda dabiiciga ah ee aan caadiga ahayn ee Kariibiyaanka.
Marka ay timaado cuntada, dhamaanteen waxaan abuurnay daqiiqado adiga kula jooga weligood. Iyo waxyaabo badan oo ka mid ah maaddooyinkayaga ku koray beerteenna khudradda dabiiciga ah, waxaa laguu dammaanad qaadayaa dhadhanka dhabta ah ee Kariibiyaanka.